SAWIRRO+MUUQAAL: Gaalkacyo oo siweyn usoo dhaweysay murashax Dr. Cali Xaaji | Allshacabka
GAALKACYO, 27 OCTOBER (ALLSHACABKA)
Dr. Cali Xaaji Warsame oo ah musharax u taagan tartanka Madaxweynaha Puntland 2019 ayaa si heersare ah lagu soo dhaweeyey magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Soodhaweyntaan oo la sheegay in aan mid nooceeda oo kale ah horey uga dhicin magaalada Gaalkacyo laguna soodhaweynayey Murashax Dr. Cali Xaaji Warsame.
Siyaasiyiin, Culimo, Waxgarad, Isimo, Haween, Ganacsato iyo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada Gaalkacyo ayaa ka soo qaybgalay soodhaweynta Murashax Dr. Cali Xaaji Warsame iyadoo tobanaan kun oo qof isugu soobaxeen magaalada Gaalkacyo.
Dadweynihii soodhaweynayey Murashax Dr. Cali Xaaji Warsame ayaa khudbado kala duwan ka jeediyey goobtaa iyadoo wajiyadooda laga dheehanayey farxad badan caleemo qoyana ruxayey.
Dr. Cali Xaaji Warsame ayaa khudbad u jeediyey dadkii soodhaweeyey isagoo siweyn ugu mahadnaqay dadkweynaha sida wanaagsan ee maqaamka sare leh usoo dhaweeyey.
Musharaxa xilka Madaxweynaha Puntland Dr. Cali Xaaji Warsame ayaa si weyn uga mahadceliyey soo dhaweeynta milgaha iyo sharafta huwan ee reer Gaalkacyo u sameeyeen, taas oo uu sheegay in aanu hilmaami doonin.
Murashax Dr. Cali Xaaji Warsame oo siweyn looga dareemayey xanuunka uu ku hayo dagaalka gobolka Sool, gaar ahaan midkii ugu dambeeyey ee Dhumay ayaa soo hadal qaaday wuxuuna yiri ” Maadaama gobolka qayb ahaan aan ka soo jeeddo si gaar ah ayey ii taabaneysa Abitiyaashay iyo Awoowayaashay, reer Mudug 25% ayaan ka ahay ee 75% waxaan ahay Abtiyaashay” Dr. Cali Xaaji Warsame oo hadalkiisa siiwatana wuxuu ugu baaqay nabad iyo in dagaalka shuruud la’aan loo joojiyo.
Dr. Cali Xaaji Warsame oo dhawaan booqasho ku kala bixin doona guud ahaan Puntland ayaa la kulmi doona qaybaha kala duwan ee bulshada uu ka helay taageero ballaaran si uu ugu soo mahadceliyo xaalad walba oo deegaanada Puntland kajirtana ugu guur galo.
HALKAAN KA DHAGEYSO WARBIXINTA DALJIR IYO HADALKII NABADOONADA
Short URL: http://www.allshacabka.com/?p=20085